Afaka milanja 200 SOT
200 SOT Mora mivelatra farany SOT & RPT Raha tsy mifarana ny volafotsy nentim-paharazana, misy faran'ny volamena koa azo ampiasaina hanatsarana ny fijerin'ny maso. Mandritra izany fotoana izany, ny loko isan-karazany amin'ny paompy dia safidinao, toy ny maintso, manga, volamena, mainty, sns. Fonosana: boaty baoritra sy paleta
202 SOT Mora misokatra farany SOT & RPT Raha tsy mifarana ny volafotsy nentim-paharazana dia misy ihany koa ny faran'ny volamena mba hanatsarana ny fahitana azy. Mandritra izany fotoana izany, ny loko isan-karazany amin'ny paompy dia safidinao, toy ny maintso, manga, volamena, mainty, sns. Fonosana: boaty baoritra sy paleta
206 SOT Mora misokatra farany SOT & RPT Raha tsy mifarana ny volafotsy nentim-paharazana, misy koa ny tendrony volamena, hanatsarana ny fijerin'ny maso. Mandritra izany fotoana izany, ny loko isan-karazany amin'ny paompy dia safidinao, toy ny maintso, manga, volamena, mainty, sns. Fonosana: boaty baoritra sy paleta
202 RCDL SOT Mora misokatra farany SOT & RPT Raha tsy mifarana ny volafotsy nentim-paharazana dia misy ihany koa ny tendrony volamena, hanatsarana ny fijerin'ny maso. Mandritra izany fotoana izany, ny loko isan-karazany amin'ny paompy dia safidinao, toy ny maintso, manga, volamena, mainty, sns. Fonosana: boaty baoritra sy paleta
Aluminium Afaka 250ml malama, Aluminium Can 355ml Standard, Aluminium Can 330ml Standard, Aluminium Afaka 310ml malama, Sifotra 200ml vita amin'ny aliminioma, Sleek 310ml Aluminium Can,